Ny Huawei Mate 9 dia azo aseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 8 Novambra | Vaovao momba ny gadget
Ny Huawei Mate 9 dia azo aseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 8 Novambra
Betsaka amintsika no nanantena ny hahita tamin'ny IFA 2016 natao tany Berlin farany teo Huawei Mate 9, fa nony farany, ilay mpanamboatra sinoa dia nisy fahagagana hafa nomanina ho anay miaraka amin'ny fianakaviana vaovao misy fitaovana, vita batemy amin'ny anarana Nova. Momba ny phablet Huawei dia efa naheno tsaho maro karazana isika, na dia izany aza Tao anatin'ny ora farany dia manomboka mahazo hery be ny fahafaha-maneho azy amin'ny 8 Novambra.
Ity fampisehoana ity dia hatao any Shina ary mety hahatratra ny tsena hatramin'ny kinova 4 hafa, miankina amin'ny mahazatra amin'ny RAM misy sy ny fitehirizana anatiny.
Araka ny tsaho ihany, tsy voamarina amin'ny fotoana rehetra na amin'ny fotoana inona na Huawei, dia hahita kinova roa misy 4 GB RAM sy 64 na 128 GB fitehirizana anatiny, ary iray hafa manana RAM 6 GB sy fitehirizana 128 GB. Hisy ihany koa ny andiany fahefatra izay ho 6 GB RAM izay hiaraka amin'ny Huawei Watch, heverinay fa ny kinova voalohany, na dia maro aza ny manondro ny fahafaham-po hataon'ilay mpanamboatra sinoa antsika amin'ny Huawei Watch 2.
Mikasika ny vidiny ny kinova fototra indrindra amin'ny fitaovana finday dia hanana vidiny 475 euro, ho an'ny 524 izay mitovy dika mitovy amin'ny 128 GB fitehirizana anatiny. Ny kinova RAM 6 GB dia hamely ny tsena amin'ny vidiny 631 euro ary farany ny vidiny izay ahitana ny Huawei Watch dia mitentina 992 euro.
Mikasika ny famolavolana ny terminal, ny zava-drehetra dia manondro fa ho fitohizan'ireo izay hita ao amin'ny Huawei P9, na dia mampiditra endri-javatra mampiavaka ny andiany Mate aza. Ho fanampin'izay, indray mandeha ary raha ny tsiliantsofina re dia hisy amin'ny loko 9 hatramin'ny farany izy io.
Heverinao ve fa ho tanteraka ny Huawei Mate 9 amin'ny 8 Novambra?.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » telephony » Finday » Ny Huawei Mate 9 dia azo aseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 8 Novambra
Google dia te hanampy antsika hitahiry ny tahan'ny angona ao amin'ny Play Store
iPhone 7 sy Galaxy S7: finday iza no manohana tsara kokoa ny rano?